Wariyaha BBC-da ee Cabdirisaaq Catoosh Oo QARAX Ka Badbaaday - Jigjiga Online
HomeSomalidaWariyaha BBC-da ee Cabdirisaaq Catoosh Oo QARAX Ka Badbaaday
Wariyaha BBC-da ee Cabdirisaaq Catoosh Oo QARAX Ka Badbaaday
Nairobi (JigjigaOnline) – Wariyaha caanka ah ee Idaacadda BBC Somali, Cabdirisaaq Catoosh ayaa ka hadlay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho oo uu ka badbaaday, kaas oo ay ku dhinteen dad tiradoodu ka badan tahay 500 qof laba sannadood ka hor.
Wariye Catoosh ayaa qoraal lagu daabacay BBC Somali, waxa uu ku sheegay in maalintii Qaraxii SOOBBE ee dadka badan ay ku dhinteen gudaha Muqdisho, in isaguna uu tallaabooyin u jiray goobta qaraxa, isla markaana uu dirqi ku badbaaday.
Akhri qoraalka wariye Catoosh oo dhamaystiran:
“Wixii aan indhaheyga ku arkay, oo aanay cidna iiga sheekeynin markii uu Muqdisho ka dhacay qarixii khasaraaha taariikhiga ah geystay ee Soome, 14-kii bishii October ee sanadkii 2017-kii!
Qiyaastii tobonkii subaxnimo ayaan aaday Bangiga Premier Bank ee ku yaalla Wadada Maka Almukara, si aan Cash Machine-ka ugala soo baxo waxoogaa lacag ah.
Waxay maalinkaas Muqdisho ahayd Magaalo farxad iyo jawi macaan ay ka muuqdaan.
Qorshaha waxaa iigu jirtay inaan galabnimada maalintaas u daawasho tago ciyaar xiiso badnayd oo dhex mareysay kooxaha Man United iyo Liverpool, ee ka wada tirsan Horyaalka waddanka Ingiriiska. Waliba waxaan ku labisnaa funaanada kooxda aan sida weyn u taageero ee Manchester United.
Markii aan bangiga kasoo dhammeystay howsheyda, waxaan aadnay suuqa weyn ee Bakaaraha.
Ma xusuusto wixii aan markaas ka rabnay suuqa, balse darawalkii gaariga nagu waday, Cabdi Axmed Yuubane, ayaa malaha meel soo marayay.
Abaaro labadii duhurnimo ayaan ka baxnay Hotel Saxafi aniga, saaxiibkey Cabdiraxman Cali Xasan iyo Cabdifataax Shariif. Waxaan tagnay dhisamaha Idaacada Sportiga ee CIYAARAHA FM oo ku taallay agagaarka Isbitaalka Digfeer si aan asxaabta ula daawado ciyaarta Man United iyo Liverpool.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaan halkaas ku soo daawanay, balse waa qadar Ilaahaye qaybtii dambe ee ciyaarta maanan sugin oo waan soo baxnay.
Bajaaj uu nagu waday Cabdifataax Shariif ayaan aniga iyo jeeri gadaal kasoo fuulnay. Xilligaas waxaa aad u kacsanaa ciidamadii xasilinta Muqdisho oo jidgooyooyin badan ay u yaalleen. Cabbaar ayaa nalagu baarayay jidka ka hor intaannaan kusoo dhicin waddada weyn ee hormarta Wasaaradda Arrimaha Dibadda, ee Afgooye ka timaada.
Waxaan aad u xusuustaa in markaan waddadaas dheer ku soo dhacnay uu na horsocday Bajaaj nin macawis gashanaa uu waday, haweeney ayaana gadaal ka saarnayd.
Isgoyska Soobe waxa uu markaas noo jiray masaafo dhan qiyaastii kun tallaabo, waxaanan markaa la sinayn darbiga wasaarada Arrimaha Dibadda, oo dhagxaanna ay hor yaalleen.
Kadib maxaa dhacay, maxayse indhaheygu qabteen?
Halmar ayaa qarax xooggan waxa uu ka dhacay horteena, qiiq, olol iyo uuro iswata ayaana cirka isku shareeray, waxaana billowday firirka qaraxa oo meel walba gaaray.
Xaqiiqdii markii hore maba nixin, balse waxaan damcay inaan Bajaajta ka boodo, saaxiibkay ayaa I reebay iina sheegay inaan Bajaajta dhex fariisanno si aan uga gabanno firirka iyo walxaha qarxaya ee aadka uu duulduulayay.
Qiyaastii daqiiqad ka dib ayuu saaxiibkeey ii sheegay inaan qaab foorarsi ah u cararno, waxaana galnay, si aan ugu gabanno, dhagxaan hortaallay darbiga Wasaarada Arimaha dibadda. Anigoo gabbanaya ayan billaabay inaan dhowr sawir qaado soona dhigo Boggayga Abdirizak Atosh.
Jawiga ayaa gabi ahaanba isu baddalay dhimasho, dhaawac iyo maydka oo meel walba daadsanaa, qofkii ugu horeeyey ee aan maydkiisa arko waxuu ahaa darawalkii waday bajaajtii naga horaysay ee ilbiriqsayada ka hor noolaa.
‘Maydka naga daayee, dhaawaca qaada’
Ambullance ama bukaan-laroor ayaa timid waxoogaa ka dib, waxayna kala gurtay dhaawicii.
Waxay ahayd markii iigu horraysay ee aan maqlo: ‘Maydka naga daayee, dhaawaca qaada’.
Intaas wixii ka dambeeyey anigu xaalad kale ayaan galay oo waxaan dareemay masiibada dhabta ee qaraxaasi ka dhalatay. Waxaan nimid Hotel Saxafi oo aan deganaa. Ma hubo sida xaalkaygu ahaa balse dareenkii aan ka qaaday wixii aan arkay ayaa noqday mahadho aan ilaa maanta xusuusto.
Intii dhimatay Ilaahay ha u naxariisto. Kuwa dhaawaca ahna Ilaahay ha u boogo-dhayo. Muqdishana wanaag badan ayaan u rajaynaa.”
Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya Iyo Madaxweynaha Masar Oo Kulmaya
MUQDISHO: Machadka HERITAGE Oo Ka Yaabay Mushkiladda Ka Taagan Somaliya